Apt 3 Haus Lucia, (Schönwald), iApartment 3, 80 sqm, 2 amagumbi okulala, max. 4 abantu - I-Airbnb
Apt 3 Haus Lucia, (Schönwald), iApartment 3, 80 sqm, 2 amagumbi okulala, max. 4 abantu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTheresia - Lohospo
UTheresia - Lohospo unezimvo eziyi-1799 zezinye iindawo.
IApartment 3, 80 sqm, 2 amagumbi okulala, max. 4 abantu
Indawo yokuhlala enamagumbi ama-3 enencasa ene-terrace enelanga kunye ne-80 yeemitha zesikwere sendawo yokuhlala ikulindile. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinefriji kunye nesikhenkcisi esincinci sine-microwave. Igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 kunye nekhabhathi enkulu ilungile ecaleni kwegumbi lokuhlambela langoku elinendlu yangasese. Ukongeza, le ndlu inendlu yangasese eyahlukileyo eneendawo zokuhlambela. Elinye igumbi lokulala elincinci lineebhedi ezi-2. Kwigumbi lokuhlala kukho itafile enkulu, iTV yesathelayithi, iWiFi, unomathotholo, iincwadi kunye nemidlalo. Iitawuli zasekhitshini kunye nezixhobo zokuhlamba zikhoyo. Siyavuya ukubonelela ngesihlalo esiphezulu, i-cot cot kunye ne-mat etshintshayo.
Indlu yokuhlala "Haus Lucia" ibonakaliswe ngendawo yayo ezolileyo kunye nembono yayo entle yamadlelo kunye nehlathi. Ikufuphi nephuli yangaphandle, ibala legalufa elincinci, kufutshane neziko. Ebusika unokutyibilika ekhephini ukunqumla isitalato kunye ne-ski enqumlayo ibaleka kufutshane. Indlu inequla elingaphakathi kwaye ukusetyenziswa kwesauna kuphela ngentlawulo. Umnxeba endlini. Igaraji engaphantsi komhlaba isimahla.
Wamkelekile kwi "Haus Lucia" eSchönwald kwiHlathi eliMnyama, indawo yezempilo yemozulu kwindawo ephakamileyo ye-1000 m. Jonga phambili kwiholide yakho kwindlu yethu egcinwe kakuhle, ezolileyo kumbindi wethambeka elijonge emazantsi kunye negadi enkulu. Ngempilo yakho, i-pool eshushu yangaphakathi kunye ne-sauna (ngomrhumo) ziyafumaneka.
Indlu iLucia yimizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu kunye nedama lokuqubha langaphandle kwaye yindawo efanelekileyo yokuqala yokuhamba kunye nokhenketho lokutyibiliza. Ngokuchasene ngqo ne "Dobel" ski lift enezibane zesikhukula kunye nokubaleka, indlu yethu ilungele abathanda imidlalo yasebusika bayo yonke iminyaka. "I-Haus Lucia" iyacetyiswa kubantu abane-allergies, njengoko iqeshwa kuphela kubantu abangatshayiyo. Ngenxa yesi sizathu, ngelishwa, izilwanyana azikwazi ukwamkelwa.
Uhlala kwindawo enezixhobo ezigcweleyo *** ezinekhitshi elifakweyo, ibhafu / indlu yangasese, ezinye zinezindlu zangasese ezongezelelweyo, unomathotholo, iTV yesathelayithi, enebalcony ejonge emazantsi okanye iterrace. Wamkelekile ukuba uze nelinen yokulala / iitawuli okanye umrhumo we-12 EUR / umntu. bolekisa. Ibhedi, i-mat yokutshintsha kunye nesitulo esiphezulu sinokunikezelwa.
Iindawo zokutyela ezinezitya zamazwe ngamazwe nezendawo zifumaneka kwindawo ekufutshane, kunye neebhaka, iibhula kunye neevenkile ezinkulu (iikhilomitha ezi-2). Isikhululo sikaloliwe saseTriberg sikumgama oziikhilomitha ezi-6. Njengondwendwe, uyaxhamla kwitikiti leKonus ngezaphulelo ezininzi kunye nohambo lwasimahla ngebhasi nololiwe ngokuhlawula irhafu yondwendwe. Sikunqwenelela iholide emnandi. Indawo yokupaka isimahla.
Izimvo eziyi-1 802
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Schönwald